လိုလားနေတာကြာပြီ – Grab Love Story
ဒီနေ့လည်း အောင်မိုးခြိမ့် သူ့ရုံးခန်းကို စောစောစီးစီး ရောက်နေတယ် ။ သူ့ထက် စောတာက သူ့တပည့် သိန်းအုပ်ကျော် ။ သူ့ကား ထိုးဆိုက်လိုက်တာနဲ့ သိန်းအုပ်ကျော် ကားဆီကို ပြေးလာတယ် ။ အောင်မိုးခြိမ့်ရဲ့ လက်ဆွဲအိတ်အပြားလေးကို သိန်းအုပ်ကျော်က လှမ်းယူလိုက်တဲ့အချိန် အောင်မိုးခြိမ့်က “ ဒီနေ့ ရှိုင်းတို့အမှု ရုံးချိန်း ရှိတယ် မဟုတ်လား…. တပည့်…” လို့ မေးလိုက်တယ် ။ သိန်းအုပ်ကျော်က ချက်ချင်းဘဲ.. “ ဟုတ်တယ်..ဆရာ…၁၁နာရီ …” လို့ ဖြေလိုက်တယ် ။ ရုံးခန်းပေါ်ကို တက်လာတဲ့အချိန် အောင်မိုးခြိမ့်က “ တပည့်ရေ..ဆရာ့အတွက် ကော်ဖီ ဖျော်တဲ့ အချိန်မှာ အောက်ထပ်ဆိုင်က ဘဲသားမုန့်လေးပါ မှာလိုက်ကွာ.. ဟီး..အိမ်က ဘာမှ မစားခဲ့ရသေးလို့ ..” လို့ သိန်းအုပ်ကျော်ကို ပြောလိုက်တယ် ။ သိန်းအုပ်ကျော်က “ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ….” လို့ ဖြေတယ် ။ မနေ့ညနေက ရေချိုးခန်းထဲမှာ မယားချောလေးနဲ့ စလိုက်တဲ့ ကာမပွဲကြမ်းလေးက အိပ်ခန်းထဲကို ရောက်သွားပြီး ပီပီပြင်ပြင် ဆွဲဖြစ်ခဲ့ကြပြီးတော့ အစရှိသွားတာနဲ့ ဆက်တိုက် ဆိုသလိုဘဲ တပွဲပြီး တပွဲဆွဲဖြစ်သွားကြတာ လေးချီတိုင်တိုင်ဘဲ ။ မနက်ကျတော့ မယားဖြစ်သူလည်း အိပ်ရာက ခါတိုင်းလို မထဘဲ နှပ်နေလို့ ဘရိတ်ဖတ်စ် ဘာမှ မစားခဲ့ရသေးတာ ..။
သူ့ရုံးခန်းကို သိန်းအုပ်ကျော်က ကြိုတင်ရောက်နှင့်ပြီး အဲကွန်းဖွင့်ပေးထားတာကြောင့် သူဝင်သွားတာနဲ့ စိမ့်အေးနေတယ် ။ ဒီနေ့ ရုံးချိန်းမှာ ရှိုင်းရဲ့ ကွန်ပိုဇာ (တေးရေးဆရာတွေ ) အာမခံရမယ်လို့သူ ကြိမ်းသေတွက်ထားတယ် ။ ပေးကမ်းခြင်းသည် အတားမဆီး ဆူးညှောင့်ခလုပ်တွေကို ဖယ်ရှားပစ်မှာ သေချာတယ်လေ ။ ကော်ဖီပူပူ တခွက်နဲ့ ဘဲသားမုန့် တပုဂံ သူ့စားပွဲပေါ်ကို ရောက်လာသည် ။ ဟာနေတဲ့ ၀မ်းဘိုက်ကို ဖြည့်တင်းပြီးချိန်မှာ သိန်းအုပ်ကျော်က အပြင်ကနေ အင်တာကွန်းနဲ့ “ ဆရာ..ဆရာ့သူငယ်ချင်း ဦးအာကာကျော်ကျော် နဲ့ ဇနီး ရောက်နေပါတယ်.. ဆရာ တွေ့နိုင်ပါမလား…” လို့ ပြောလိုက်တာကို သူ ကြားလိုက်ရလို့ သူ့သူငယ်ချင်း အာကာကျော်ကျော် သူ့မိန်းမကို ခေါ်လာ မိတ်ဆက်ပေးမယ် လို့ ပြောခဲ့တာကို သတိရလိုက်တယ်…။ “ တပည့်ရေ..လွှတ်လိုက်ပါကွယ်…” လို့ သူ ပြန်ပြောလိုက်ရင်း နံရံက မှန်မှာ သူ့ကိုယ်သူ ပြန် စစ်ဆေးလိုက်တယ် ။ ဘဲသားမုန့်ကြောင့် ပေနေတဲ့ ဆီတွေကို လက်သုတ်ပုဝါနဲ့ သေသေချာချာ သုတ်ပစ်လိုက်တယ် ။ အာကာကျော်ကျော်နဲ့ သူ့မိန်းမ ၀င်လာတယ် ။ “ လာ သူငယ်ချင်း..ထိုင်ကြပါ…” အာကာကျော်ကျော်ရဲ့ မိန်းမက တော်တော် ငယ်တာဘဲ ။ သူ့မိန်းမ ဒီလောက် ချောလိမ့်မယ်လို့ အောင်မိုးခြိမ့် ထင်မထားခဲ့ဘူး ။
အသားဝင်းဝါဝါ စွဲဆောင်မှုအပြည့် ရှိတဲ့ မျက်လုံးမျက်ခုံးနဲ့ နှာတန်ပေါ်ပေါ် နှုတ်ခမ်းလှလှနဲ့ ကုလားဆင်လေး ။ ရုတ်တရက် ကြည့်ရင် မဂိုကုလားဖြူမလေး နဲ့ တူသည် ။ “ အောင်မိုးခြိမ့်..ဒါ ငါ့မိန်းမ ..ဆွေဆွေမာထွန်း.. ဆွေဆွေ..ဒါ မောင့် အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းကြီး အောင်မိုးခြိမ့် ….မောင်မပါဘဲ ရန်ကုန်ကို လာတဲ့အခါ ဒီကောင်ကြီးကို အစစ အားကိုးနိုင်တယ် …” အာကာကျော်ကျော်က သူ့မိန်းမ ဆွေဆွေမာထွန်းနဲ့ အောင်မိုးခြိမ့်ကို မိတ်ဆက်ပေးတယ် ။ အောင်မိုးခြိမ့်က “ ဘာဘဲလိုလို ပြောပါ ..အာကာ မပါလည်း ကျနော့်ဆီကို ၀င်ပါ …ဆွေဆွေ…” လို့ ပြောတယ် ။ အာကာကျော်ကျော်နဲ့ ဆွေဆွေမာထွန်းတို့ကို အောက်ထပ်က ဆိုင်က ဘဲသားမုန့်နဲ့ လဖက်ရည်နဲ့ မှာခိုင်းပြီး ကျွေးတယ် ။ သူတို့ လင်မယား ပြန်ဖို့ ထကြတော့ အောင်မိုးခြိမ့် သူ့ရုံးခန်း အပြင်ဖက်အထိ လိုက်ပို့နုတ်ဆက်တယ် ။ သူ သတိထားမိလိုက်တာက အာကာကျော်ကျော်ရဲ့ ဇနီးချောလေး ဆွေဆွေမာထွန်းက သူ့မိန်းမ ခင်ဦးဦးမြင့် ထက်တောင် ပိုပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းနေတာပါဘဲ ။ အချိုးကျ လှပလွန်းတဲ့ ခါးသိမ်သိမ်အောက်က တင်ပါးလှလှကော့ကော့ကြီးတွေနဲ့ ပေါင်တန်သွယ်လှလှတွေကို မသိမသာ ကြည့်ပြီး သွားရေယိုသွားရတယ် ။ သူတို့ ပြန်သွားပြီး ခဏခဏ ဘဲ ဆွေဆွေမာထွန်းရဲ့ တင်ပါးလှလှတွေကို ပြန်လည် မြင်ယောင်မိပြီး သဘောကျနေမိတယ် ။
ငယ်သူငယ်ချင်းရဲ့ မိန်းမ..လင်ရှိမိန်းမ ဆိုတာကို သတိမထား ဂရုမစိုက် တော့ဘဲ ကာမရာဂစိတ်ကို ထိန်းချုပ်ဆင်ခြင်မှု လုံးဝ မရှိတော့ဘူး ။ သိန်းအုပ်ကျော် ဒီနေ့ ရုံးခန်းကို တက်လာတော့ ဘောစ် အောင်မိုးခြိမ့် ရုံးခန်းကို သူ့ထက် စောပြီး ရောက်နှင့်နေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ် ။ ဒီလို ခဏ ခဏ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ အောင်မိုးခြိမ့်က နံမည်ကျော်တာ အောင်မြင်တာလည်း မပြောနဲ့ ။ ဝိရိယက ရှိတယ် ။ ကြိုးစားတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဆရာ ကော်ဖီသောက်မလား.. ဘာ ဘရိတ်ဖတ်စ် စားမလဲ မေးမလို့ သူ့သီးသန့်ရုံးခန်းထဲကို ၀င်ဖို့ ကြိုးစားတော့ အထဲက သော့ပိတ်ထားတာကို သိန်းအုပ်ကျော် သိလိုက်ရတယ် ။ ဆရာက ဒီလို လုပ်လေ့ မရှိဘူး ။ အထူးသဖြင့် ကော်ဖီ လာပို့ပေးမယ့် ဒီလို မနက်စောစော အချိန် ။ သည်အခိုက်မှာ ဆရာ့ရုံးခန်းထဲ့ အသံတချို့ကို ကြားလိုက်ရတယ် ။ မိန်းမ တယောက်ရဲ့ အသံ ။ ဟာ….ဘယ်က မိန်းမများပါလိမ့် ..။ ဟို ရှိုင်းဆိုတဲ့ အဆိုတော်လေးများလား …။ ဒါမှ မဟုတ် သုန်တြာ လား.. ခရစ်တီရာနာ လား …။ အထဲက အသံဘလံတွေကို နားထောင်ကြည့်ဖို့ ဆရာ့ရုံးခန်း နံရံနားကို သိန်းအုပ်ကျော် တိုးကပ်လိုက်တယ် ။ ဆရာ့အခန်းနံရံနား ကပ်ပြီး နားထောင်ပေမယ့် မိန်းမတယောက်ရဲ့ တခိခိ တခစ်ခစ် ရယ်သံတွေကိုဘဲ ကြားရပြီး ဒီမိန်းမဟာ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ သူ မခန့်မှန်းတတ်ဘူး ဖြစ်နေတယ် ။
သိန်းအုပ်ကျော်သည် သူ့ဆရာ အောင်မိုးခြိမ့် ဇ ရှိတာကို သိနေတာ ကြာပါပြီ ။ ဆရာအောင်မိုးခြိမ့်သည် မိန်းမကိစ္စမှာ နံမည်ကြီးတာကိုလည်း တပည့်ရင်းမို့ သိနေတာ ကြာပြီ ။ ဆရာအောင်မိုးခြိမ့်သည် သူ့ဆီမှာ ရှေ့နေပညာ လာသင်ကြတဲ့ မိန်းကလေး တပည့်မများကို တယောက်မှ အလွတ်မပေးတာလည်း သိနေတွေ့နေရတယ် ။ သိန်းအုပ်ကျော်သည် သူ့အပေါ် အလွန် စေတနာထားပြီး သူ့ကို ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ထားတာကြောင့် ဆရာအောင်မိုးခြိမ့် ဘယ်လောက် သောင်းကျန်း သောင်းကျန်း သူကတော့ သစ္စာရှိ လေးစားနေမှာ ဘဲ ။ ဆရာ့ရုံးခန်းထဲကို စောစောစီးစီး ရောက်နေပြီး တခိခိ ရွနေတဲ့ မိန်းမဟာ ဘယါသူလည်း ဆိုတာကို သိန်းအုပ်ကျော် သိချင်စိတ် တအား ပြင်းပြနေတယ် ။ ဒါကြောင့် ဘိုက်ဆာနေတာတောင် အောက်ထပ်က ဆိုင်မှာ သွား မစားသေးဘဲ ဆရာ့ရုံးခန်းထဲက ထွက်လာမယ့် မိန်းမကို တွေ့ရဖို့ အောင့်အီးပြီး ဟိုဟာ လုပ်သလိုလို ဒီဟာ လုပ်သလိုလိုနဲ့ စောင့်နေလိုက်တယ် ။ မကြာပါဘူး ။ ရုံးခန်းထဲကနေ ဆရာ့ခေါ်သံ ကြားလိုက်ရတယ် ။ “ သိန်းအုပ်ကျော်ရေ…..ဆရာ့အတွက် အောက်က ဆိုင်က ကြက်ဥကြော်.. အိုဗာတင်း.. မှာပေးပါကွယ် … ဧည့်သည်အတွက်ပါ ၂ ယောက်စာပေါ့….” လို့ ပြောလိုက်တဲ့ ဆရာ့အသံက မောဟိုက်နေသလိုလိုဘဲ ။
“ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာ…” လို့ ပြန်ဖြေရင်း သိန်းအုပ်ကျော် အောက်ထပ်က ဆိုင်ကို ဖုန်းနဲ့ ဆက်ပြီး မှာလိုက်တယ် ။စားစရာတွေ လင်ဘန်းနဲ့ လာပို့တော့ သိန်းအုပ်ကျော် အထဲကို ၀င်ပို့ရတယ် ။ သိန်းအုပ်ကျော် တအား အံ့အားသင့်သွားတယ် ။ အထဲမှာ ရောက်နေတဲ့ မိန်းမက ဆရာ့သူငယ်ချင်း ဆိုတဲ့ဦးအာကာ ကျော်ကျော်ရဲ့ ဇနီး မဆွေဆွေမာထွန်း ဖြစ်နေတယ် ။ ဘယ်လို အစောကြီး ရုံးခန်းထဲ ရောက်နေကြသလဲတော့ မသိဘူး ။ ဆရာအောင်မိုးခြိမ့်က ကြက်ဥကြော်နဲ့ ပေါင်မုန့်မီးကင်ကို အားရပါးရ စားရင်း “ သိန်းအုပ်ကျော် ရေ..မင်း ဒီနေ့ ဆွေဆွေမာထွန်းရဲ့ ရုံးကိစ္စလေးတွေ သွားပေးရမယ်ကွာ..” လို့ ပြောတယ် ။ သိန်းအုပ်ကျော်လည်း သွားဖြီးပြပြီး “ စိတ်ချပါ ဆရာ..လိုတာပြောပါ..ကျနော် သွားပေးမယ်..” လို့ ပြန်ပြောရင်း အခန်းထဲက အထွက် ဆွေဆွေမာထွန်းရဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကို ရှိုးလိုက်တယ် ။ အောင်မိုးခြိမ့် ဒီနေ့ အမှုတခု ရှိတာကြောင့်ဆွေဆွေမာထွန်းကို ရှော့ပ်စန်တာ တခုကို လိုက်ပို့လိုက်ပြီး အမှုပြီးတဲ့အချိန် ပြန်တွေ့ကြဖို့ ချိန်းထားလိုက်တယ် ။ ဒီနေ့ ရင်ဆိုင်ရမယ့် အမှုက အပြန်အလှန် တရားစွဲဆိုထားတဲ့မယားခိုးမှုနဲ့ နာကျင်စေမှု ။ ယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူက မိန်းမကို တခြားလူတယောက်နဲ့ ကာမမှုပြုနေတာကို ပက်ပင်းမိတော့ ဆွဲလားထိုးလားတွေ ဖြစ်ကုန်တဲ့အခါ ကြာခိုတဲ့ လူကို လိုက်ရိုက်နှက်တဲ့အခါ မိန်းမက ကြားဝင်ခံလိုက်လို့ မိန်းမလက်ကျိုးသွားတယ် ။
ဒီလူက ကြာခိုတဲ့ လူကို မယားခိုးမှုနဲ့ တရားစွဲတော့ မိန်းမကလည်း လင်ငယ်ကို ထိလို့မခံချင်ဘဲ သူ့ယောက်ျားကို နာကျင်စေမှုနဲ့ ပြန်စွဲတယ် ။ အောင်မိုးခြိမ့်ကို ယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူက ငှားတာ ။ အောင်မိုးခြိမ့်လည်း အမှုအခြေအနေကို ကြည့်လိုက်တော့ နှစ်ဖက်စလုံးက ထောင်ကျနိုင်တဲ့ ဟာချည်းဘဲ ။ တရားရုံးကို ရောက်တော့ သူ့အမှုသည်က ကြိုရောက်နေတယ် ။ အမှုသည်က အစိုးရ ရုံးတရုံးမှာ အရာရှိတယောက် ဖြစ်တော့ ထောင်ကျ မခံနိုင်ဘူး ။ ထောင်ကျရင် အလုပ်ပါ ပြုတ်မှာ ။ သူ့မိန်းမကို ကြာခိုတဲ့ကောင်ကလည်း သူ့ထက်တောင် ပိုဆိုးသေးတယ် ။ အစိုးရလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တခုက အရာရှိ ။ ထောင်ကျရင် သူလည်း အလုပ်ပြုတ်မယ်လေ ။ ဒီတော့ တင်းမာနေတာကို ကြားကနေ ညှိပေးလိုက်တာက နှစ်ဦးနှစ်ဖက် မနစ်နာဘူးလို့ အောင်မိုးခြိမ့် တွက်ဆသလို တဖက်က မိန်းမရဲ့ ရှေ့နေကလည်း အောင်မိုးခြိမ့်လိုဘဲ ထင်မြင်တယ် ။ ဒါနဲ့ အောင်မိုးခြိမ့်လည်း တရားသူကြီး ဘယ်သူလဲ ဆိုတာကို ကြည့်လိုက်တော့ သူ ၀င်ထွက်လို့ ရမယ့် တရားသူကြီးလည်း ဖြစ်နေတာနဲ့ တိုင်ပင်ကြည့်လိုက်တော့ နှစ်ဖက်စလုံး နာမယ့်သဘော ပြသနေတယ် . ညှိလိုက်တာက အကောင်းဆုံးဘဲ တဲ့ ။ ဒါနဲ့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ကြေအေးလိုက်ဖို့ လုပ်ကြတယ် ။
ကြေအေးလိုက်ကြပေမယ့် သူ့အမှုသည်နဲ့ ဟိုဖက်က ကြာခိုတဲ့ ငတိတို့ရဲ့ တင်းမာမှုကတော့ နိုင်းလောက်ရှိတယ် ။ သူက သူ့အမှုသည်ကို ကိုယ်ကလည်း အလုပ်အကိုင်နဲ့ ဆိုတော့ ထပ်ပြီး မညိရင် ကောင်းတယ်…စိတ်လျှော့ပါ လို့ အကြံပေးတယ် ။ အမှုသည်ကလည်း သူပြောတာကို လက်ခံပါတယ် ။ အမှုသည်က ထမင်းကျွေးလို့ တရားရုံးနားက ထမင်းဆိုင်မှာ ကုန်းဘောင်ကြော်..ကိုက်လန်ကြော်နဲ့ ကောင်းကောင်းဆွဲနေတုံး ဖုန်းလာတယ် ။ အိုး..ရှိုင်းလေး ခေါ်တာ ။ ကိုချုပ်တို့ အာမခံ ရတဲ့နေ့က ဆရာနဲ့တနေရာ မသွားလိုက်ရဘူး.. ဆောရီးဘဲ လို့ ရှိုင်းက တီတီတာတာ ဘာညာဘာညာ ပြောတယ် ။ အောင်မိုးခြိမ့်လည်း ရှိုင်းနဲ့ တွေ့ဖို့ ချိန်းလိုက်တယ် ။ ထမင်းစားပြီးလို့ အမှုသည်ကို နုတ်ဆက်ပြီး သူ့ကားဆီကို လျှောက်သွားလိုက်တဲ့အချိန် ဖုန်းတခု ထပ်လာလို့ ကြည့်လိုက်တော့ ဆွေဆွေမာထွန်း ဖြစ်နေတယ် ။ ဆွေဆွေမာထွန်းက “ အကိုအောင်…ဆွေ ရှော့ပင် လုပ်လို့ပြီးပြီ … အကိုအောင် လာခေါ်နိုင်ပြီလားဟင်…” လို့ မေးတယ် ။ “ လာခေါ်နိုင်ပြီ…ဆွေလေး….လာပြီ..လာပြီ….ဒါနဲ့ ဆွေလေးကို တခု ရီကွက်စ် လုပ်လို့ ရမလားဟင်…” လို့ အောင် မိုးခြိမ့် မေးလိုက်တယ် ။ “ ဘာများလဲ အကိုအောင်..” “ အကို့ကိုလေ..အကိုဘဲ ခေါ်ပါလား..ဟီး… အကိုအောင် ဆိုတော့ တမျိုးကြီးဘဲ….” “ ဟုတ်ကဲ့…အကို…” အောင်မိုးခြိမ့်သည် သူငယ်ချင်း အာကာကျော်ကျော်ရဲ့ မိန်းမ ဆွေဆွေမာထွန်း ကိုလည်း အလွတ်မပေးချင် ။
ဆွေ ဆွေမာထွန်းကလည်း သူ့လိုဘဲ တဏှာရမက် ကြီးတဲ့ မိန်းမ ။ မြွေမြွေချင်း ခြေမြင် တယ် ။ ဒါကြောင့်လည်း သူ့လင် လိုက်မလာတဲ့ ရန်ကုန်ခရီးစဉ်မှာ အောင်မိုးခြိမ့်နဲ့ အပြတ်ကဲပစ်တော့မည် ။အောင်မိုးခြိမ့် ဆွေဆွေမာထွန်းကို ချိန်းထားတဲ့နေရာမှာ သွားခေါ်လိုက်ပြီး သူကဲနေကျ သူခေါ်သွားနေကျ ကွန်ဒို အခန်းကို ခေါ်သွားလိုက်တယ် ။ တနေ့ကျရင် ဆွေဆွေမာထွန်းနဲ့ အာကာကျော်ကျော်တို့ ၀ယ်တဲ့အခါ အိုင်ဒီယာ ရအောင် လိုက်ကြည့် ဆိုပြီး ခေါ်သွားတာ ။ ဆွေဆွေမာထွန်းကလည်း အောင်မိုးခြိမ့် အကြံကို သိတယ် ။ ဒီလူကြီး ကြံစည်တော့မယ် ဆိုတာ ။ ဒီလို သိသိကြီးနဲ့ လိုက်သွားရတာက ရင်ခုံစရာကြီး ။ ဆွေဆွေမာထွန်း စိတ်တွေ အရမ်း လှုပ်ရှားနေတယ် ။ အောင်မိုးခြိမ့်ကလည်း သူငယ်ချင်း အရင်းအခြာရဲ့ မိန်းမ အပေါ် စည်းမစောင့်ဘဲ အခုလို ကြံစည်ရတာကို သဘောကျနေတယ် ။ သူ့စိတ်တွေက မလုပ်သင့်တာကို လုပ်ရတာကို ပိုပြီး စိတ်လှုပ်ရှားသလိုဘဲ ။ ပထမ တခါ အာကာကျော်ကျော်နဲ့ လာကထဲက ဆွေဆွေမာထွန်းရဲ့ စွင့်ကား တောင့်တင်းတဲ့ အိုးကြီးတွေကို သူ့လင် အလစ်မှာ ခိုးခိုးကြည့်ပြီး စိတ်နဲ့ ပြစ်မှားနေခဲ့တာ ။ “ အကိုအောင်..အဲလေ..အကိုက တအား ချမ်းသာတာဘဲနော်…တိုက်ခန်းတွေ အပို ၀ယ်ထားနိုင်တယ်…” “ နဲနဲပါးပါးပါး ဆွေဆွေရယ်..ဟဲဟဲ….” ကွန်ဒို အဆောက်အဦးရဲ့ အေရှ့မှာ ကားကို ရပ်လိုက်တဲ့အချိန် အောင်မိုးခြိမ့် ပေါင်ကြားက မြွေဟောက်က တအားကို ပါးပျဉ်းထောင်နေလို့ ကားပေါ်က အဆင်းရ ခက်နေတယ် ။
သူ့လက်ဆွဲအိတ် အပြားလေးနဲ့ ကာပြီးထားရတယ် ။ ဆွေဆွေမာထွန်းနဲ့ အပေါ်ထပ် သူ့တိုက်ခန်းကို တက်ကြတဲ့အခါ ဆွေဆွေမာထွန်းကို လုပ်ရတော့မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်က အောင်မိုးခြိမ့်ကို တအား ပိုပို ထန်စေတယ် ။ တိုက်ခန်းတံခါးကို ဖွင့်တော့ သော့တန်ကို သော့ပေါက်ထဲ ထိုးလို့ မရဘူး ။ သူ့လက်တွေ တုန်နေလို့ ။ ဝါရင့်နေတဲ့ လူတယောက် ဖြစ်ပေမယ့် လင်ရှိမိန်းမတယောက်ကို ခိုးစားရမှာမို့ လူငယ်လူသစ်လေး တယောက်လိုဘဲ အောင်မိုးခြိမ့် စိတ်တွေ မတည်ငြိမ် ..။ “ အကို့လက်တွေ တုန်နေတယ်…ခိခိ..” ဆွေဆွေမာထွန်းက ပြုံးစိစိနဲ့ ပြောလိုက်တယ် ။ အခန်းထဲကို ရောက်တော့ အောင်မိုးခြိမ့်က ဒါက မီးဖိုခန်း.. ဒီမှာက ရေချိုးခန်းနဲ့ အိမ်သာ…ဆိုပြီး လိုက်ပြတယ် ။ အိပ်ခန်းထဲကို ရောက်တော့ ဆွေဆွေမာထွန်းက ထူထဲ တဲ့ မွေ့ယာကြီးပေါ် ထိုင်ကြည့်တယ် ။ “ အကို့ ကုတင်နဲ့မွေ့ယာက တကယ့် အပျံစားဘဲကွာ.. အိပ်ချင်စိတ်တောင် ပေါက်လာပြီ….” “ အိပ်ချင် အိပ်လိုက်ပေါ့ ဆွေဆွေရဲ့…” ဆွေဆွေမာထွန်းက ကုတင်ပေါ်ကို ပက်လက်လှဲချလိုက်တယ် ။ အောင်မိုးခြိမ့်လည်း ဆွေဆွေမာထွန်း ဘေးမှာ ၀င်ထိုင်လိုက်တယ် ။ “ အကို..အကို့သူငယ်ချင်း အကြောင်း သိထားလား…” “ ဟင်..ဘာအကြောင်းလဲ…မသိထားဘူး…” “ အင်း…သူ..သူ….ဟိုဒင်း မလာတော့ဘူး အကို…” “ ဟင်..ဟုတ်လား…ကြာပြီလား….” “ အင်း…နဲနဲကြာပြီ …သူသောက်နေတဲ့ ဆေးတွေကြောင့် ထင်တာဘဲ …”။
“ မသိဘူး..ဆွေဆွေ..သူကလည်း မပြောပြဘူး … ဒါဆို ဆွေဆွေနဲ့ သူ ဟိုဟာ မဖြစ်ကြဘူးပေါ့နော်..” “ အင်း…ကြာပြီ …” “ အို..ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ…ဆွေဆွေရယ်….” “ ဒီလိုဘဲပေါ့ အကိုရယ်…ဆွေလည်း…စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ရတာပေါ့..သူကမှ မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘဲလေ….” အောင်မိုးခြိမ့်လည်း ပန်းသေနေတဲ့ သူငယ်ချင်း ကိုယ်စား သူ့မိန်းမ တောင့်တောင့် တင်းတင်းလေးကို တာဝန်ယူပေးချင်စိတ်တွေက ပိုများလာတယ် ။ “ ဆွေဆွေ့ကို သနားလိုက်တာ….” အို..အကိုက ဘာတတ်နိုင်တာမို့လဲ..” “ တတ်နိုင်တာပေါ့ ဆွေဆွေရဲ့..ဆွေဆွေ့အခက်အခဲ လိုအပ်ချက်တွေကို အကိုက သူငယ်ချင်း ကိုယ်စား ဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ် .. ဆွေဆွေ လက်ခံရင်ပေါ့..”. “ အင်း..အကိုရယ်..ဒီကိစ္စ ပေါက်ကြားလို့တော့ လုံးဝ မဖြစ်ဘူး .. သူက စိတ်ကြီးတယ် .. သိလို့ကတော့ ဆွေဆွေ့ကို သတ်ပစ်မှာ…” ဒီအချိန်မှာ ပက်လက်လှဲနေတဲ့ ဆွေဆွေမာထွန်းရဲ့ ပေါင်တန်တွေ အပေါ်ကို အောင်မိုးခြိမ့်ရဲ့ လက်တဖက်ကရောက်နေပြီး သာသာလေး ပွတ်သပ်ပေးနေတယ် ။ “ လှို့ဝှက်ပြီး လုပ်ကြရင် ဘယ်လိုမှ မသိနိုင်ပါဘူး …” “ ဆွေလေ..လိုလည်း လိုချင်တယ်… ကြောက်လဲ ကြောက်တယ်….” “ မကြောက်နဲ့..ဆွေ့လိုအင်တွေ ဆန္ဒတွေကို အကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါရစေ…. ဆွေ ကျေနပ်တဲ့အထိ အကို တာဝန်ယူပေးချင်တယ်…” “ အကို..ဆွေ့ကို အပေါစားလို့ ထင်သွားလားဟင်…” “ မထင်ပါဘူး ဆွေရယ်…ဆွေ့အခက်အခဲကို ကိုယ် သဘောပေါက် စာနာပါတယ်…”။
အောင်မိုးခြိမ့်က ဆွေဆွေမာထွန်းရဲ့ ဘေးကို ယှဉ်တွဲ လှဲချလိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းပြဲပြဲထူထူတွေကို သူ့နှုတ်ခမ်းကြီးနဲ့ ငုံ စုတ်လိုက်တော့ ဆွေဆွေမာထွန်းလည်း သူ့ကို ပြန်ဖက်ပြီး အလိုက်သင့် ပြန်လည် နမ်းစုတ်ပါတော့တယ် ။ အောင်မိုးခြိမ့်လည်း စိတ်ထဲက “ ရပြီကွ..” လို့ ပြောမိရင်း တအား ပျော်သွားတယ် ။ အစလေးဘဲ ခက်ခဲတာလေ ..။ အိုကေပြီဆိုရင် စိုပြေပြီဘဲ ။ ဆွေဆွေမာထွန်းရဲ့ လျာလေးကို သူ့လျာကြီးနဲ့ ကလိပေးလိုက်တော့ ဆွေဆွေမာထွန်းလည်း သူကလိတဲ့အတိုင်း ပြန်ကလိပေးလာလို့ လျာချင်း စီချင်းထိုးပွဲလေးက တော်တော် ပြင်းထန်သွားရတယ် ။ လက်မြန်ခြမြန် ရှိတဲ့ စားနေကြ ကြောင်ပါးကြီး အောင်မိုးခြိမ့်က လျာချင်း ကလိနေတဲ့ အချိန်မှာ ဆွေဆွေမာထွန်းရဲ့ ထမိန်ကို ဆွဲချွတ်လိုက်တယ် ။ ဆွေဆွေမာထွန်းကလည်း ခံချင်စိတ် ပြင်းပြလွန်းနေတော့ အက်ျီကို သူမဖါသာ ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် ။ ပင်တီလေးကို အောင်မိုးခြိမ့် ချွတ်ပစ်နေတဲ့အချိန် ဆွေဆေမာထွန်းက သူမ ဘရာစီယာကို ချိတ်ဖြုတ် ချွတ်ပစ်လိုက်တော့ ဆွေဆွေမာထွန်း ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်သွားပြီ ။ ဖွံ့ထွားလွန်းတဲ့ ရင်စိုင်ကြီးတွေက ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့ သားကောင်းမိခင် တယောက် လို့ ပြသဖေါ်ညွှန်းနေတယ် ။ အောင်မိုးခြိမ့်လည်း သူ့ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်တွေ အားလုံးကို တခုမကျန် ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် ။ နှစ်ယောက်စလုံး ကိုယ်တုံးလုံးတွေ နဲ့ ဖြစ်ကုန်ပြီ ။ အောင်မိုးခြိမ့်ရဲ့ လက်နက်ကြီးက မတ်မတ်ထောင်နေတယ် ။
ဆွေဆွေမာထွန်း တအံ့တသြ ဖြစ်နေတယ် ။ “ ဟယ်..အကိုရယ်…ဆွေ့ယောက်ျား အကို့ဘော်ဒါရဲ့ ဟာနဲ့ အကို့ဟာနဲ့က တခြားစီဘဲကွာ…အကို့ဟာကြီးက တအားကြီးတာဘဲ… ရှည်လည်း ရှည်တယ်…” “ ကြိုက်လား..ဆွေဆွေ..ဟင်းဟင်း….” ဆွေဆွေမာထွန်းက ခေါင်းလေးညှိမ့်ပြပြီး ” ကြိုက်တယ် အကို ” လို့ ပြောရင်း အောင်မိုးခြိမ့်ရဲ့ ဒုတ်ကြီးကို လှမ်း ကိုင်ဆုပ်လိုက်ပါတယ် ။ “ စုတ်ပေးရမလား ..အကို…” “ အင်း..” ဆွေဆွေမာထွန်းက အောင်မိုးခြိမ့်ရဲ့ ဒစ်ပြဲကြီးကို ငုံစုတ်လိုက်သလို တွဲလောင်းကျနေတဲ့ ဂွေးစိနှစ်လုံးကိုလည်း သူမ လက်ကလေးနဲ့ ဆုပ်နယ်နေတယ် ။ အောင်မိုးခြိမ့်လည်း ဆွေဆွေမာထွန်းရဲ့ ဖွံ့ထွားလုံးဝန်းတဲ့ ရင်သားတွေကို လက်နဲ့ ဆုပ်နယ်ဆော့ကစားရင်း ဆွေဆွေမာထွန်း စုတ်တာတွေကို မျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီး ခံယူနေတယ် ။ အောင်မိုးခြိမ့် ဆွေဆွေမာထွန်းကို အကြာကြီး စုတ်ခွင့် မပေး ။ ဆွေဆွေမာထွန်းကို သူ လုပ်ချင်နေပြီ ။ ဆွေဆွေမာထွန်းကလည်း ခံချင်နေတာမှ အဖုတ်ထဲက လှိုက်လှိုက် ယားနေတာ ။ နှစ်ယောက်စလုံး တအား ထန်နေကြတာကြောင့် ပက်လက်ပေါင်ဖြဲကားပေးတဲ့ ဆွေဆွေမာထွန်းရဲ့ ပေါင်ကြားထဲ နေရာဝင်ယူလိုက်ပြီး ဖေါင်းမို့နေတဲ့ ဆွေဆွေမာထွန်းရဲ့ အဖုတ်ကြီးထဲ သူ့လိင်တန်ကို ထိုးနှစ်ထည့်ပြီး အောင်မိုးခြိမ့် အသားကုန် ဆောင့်ထည့်တော့ ဆွေဆွေမာထွန်းလည်း လိုလားနေတာ ကြာပြီ ဖြစ်တဲ့ကာမ အရသာတွေကို ရရှိလိုက်ရလို့ ဖင်ကြီးတွေ ရမ်းခါလှုပ်ရင်း ကော့ပင့်ပေးကာ ခံယူနေတယ် ။
ဆွေဆွေမာထွန်းရဲ့ အဖုတ်က ထူးထူးခြားခြား လုပ်လို့ကောင်းလွန်းနေတယ် ။ ဆွေဆွေမာထွန်းရဲ့ အဖုတ်ထဲက သူ့လိင်တန်ကို ဆွဲယူနေသလို ခံစားရတာကြောင့် ထိုးဆောင့်ချက်တိုင်းက အရသာ ရှိနေတယ် ။“ မျှော့ ” ပါတဲ့ စောက်ဖုတ် ဆိုတာမျိုးကို တွေ့နေပြီ လို့ အောင်မိုးခြိမ့် ထင်လိုက်တယ် ။ ဆောင့်ကောင်းကောင်းနဲ့ တအားဆောင့်လိုက်တာ ဆွေဆွေမာထွန်းရဲ့ အဖုတ်ထဲကလည်း သူ့လိင်တန်ကို တအား ရစ်ပတ်ဆွဲယူနေတာမို့ မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ သုတ်ရည်တွေ အချက်ပေါင်းများစွာ ထုတ်လွှတ်မိပြီး “ ပြီး ” သွားရတော့တယ် ။ “ ဆွေ..တအားကောင်းတယ်ကွာ..ဆွေ့ အဖုတ်က ကိုယ့်လီးကို ရစ်ဆွဲညှစ်နေသလိုဘဲ ….ဆွေကော ပြီးတယ် မဟုတ်လားဟင်..” “ ပြီးတယ် အကို..နှစ်ခါတောင် ပြီးတယ်…အကို ကြိုက်တယ် ဆိုလို့ ဆွေ ၀မ်းသာပါတယ် … ဆွေလည်း အကို လိုးတာ အရမ်းကြိုက်တယ်… တ၀ လိုးကြမယ်နော်…အကို စိတ်ကြိုက်သာ လိုး…” ဆွေဆွေမာထွန်း နဲ့ အောင်မိုးခြိမ့်တို့ ခဏ လှဲလျောင်း အနားယူလိုက်ကြပြီးတော့ ဆွေဆွေမာထွန်းက ရေချိုးခန်းထဲကို မိမွေးတိုင်း ကိုယ်နဲ့ လျှောက်သွားလိုက်တဲ့ အချိန် အောင်မိုးခြိမ့်လည်း သေးကျဉ်တဲ့ ခါးလေး အောက်က စွင့်ကားတဲ့ ဖင်တုန်းကြီးတွေ တုန်ခါသွားနေတာကို တွေ့နေရပြီး စိတ်တွေ ပြန်ထကြွလာရတယ် ။
ကုတင်ပေါ်က ဖျတ်ကနဲ ထလိုက်ပြီး ဆွေဆွေမာထွန်းရဲ့ အနောက်ကို ခပ်သွက်သွက် ပြေးလိုက်သွားလိုက်တယ် ။ ဆွေဆွေမာထွန်းလည်း အိမ်သာခွက်ပေါ်မှာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး သေးပေါက်နေတယ် ။ အောင်မိုးခြိမ့်လည်း ဆွေဆွေမာထွန်းရဲ့ အဖုတ်ထဲက သေးတွေ ထွက်နေတာကို သေသေချာချာ စိုက်ကြည့်ပြီး စိတ်တွေ တဟုန်ထိုး ထကြွလာရတယ် ။ သူ့လိင်တန်လည်း ချက်ချင်းဘဲ တောင်မတ်လာတယ် ။ ဆွေဆွေမာထွန်း သေးပေါက်အပြီး ထလိုက်တဲ့ အချိန် အောင်မိုးခြိမ့်က ဆွေဆွေမာထွန်းကို ဆွဲဖက်လိုက်ပြီး ဆွေဆွေမာထွန်းရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို စုတ်ယူလိုက်သလို လက်တွေကလည်း ဖင်တုန်း ထယ်ထယ်ကြီးတွေကို ဖမ်းညှစ်လိုက်တော့ ဆွေဆွေမာထွန်းလည်း “ အကို ရေဆေးကြရအောင်ကွာ..အကိုက အားကြီးလိုက်တာ..” လို့ ပြုံးစိစိနဲ့ ပြောလိုက်ပြီး အောင်မိုးခြိမ့်ရဲ့ ပြန်တောင်မာနေတဲ့ လိင်ချောင်းကြီးကို ဆပ်ပြာနဲ့ ပွတ်တိုက် ဆေးကြောပေးလိုက်တယ် ။ “ ဆွေက ဘယ်ကိုမှ ထွက်ပြေးမျွှာ မဟုတ်တာ အကိုရယ်..အကို စိတ်ကြိုက်သာ လိုး..ဆွေက လိုးလေ ကြိုက်လေဘဲ….” လို့ ညုတုတုနဲ့ ပြောလိုက်ပြီး သူမစောက်ဖုတ်ကိုလည်း ဆပ်ပြာနဲ့ ကျကျနန ဆေးကြောလိုက်ပါတယ် ။ ဆွေဆွေမာထွန်းနဲ့ အောင်မိုးခြိမ့် တချီပြီး တချီ ဆွဲကြတာ မိုးကြီး ချုပ်လို့ ချုပ်မှန်းတောင် သူတို့ မသိကြတာ့သည် ……… ပြီးပါပြီ။